Shiinaha Tablet PC Turnkey PCB Golaha Electronic Soo saaridda iyo Warshad | KAISHENG PCB
PCBFuture wuxuu ku lug lahaa wax soo saarka PCB. Sanadihii la soo dhaafay, waxaan ahayn macaamiil udub dhexaad u ah waxaanna keennaa naqshadeyn PCB-xawaare sare leh oo tayo sare leh, iyada oo la tixgelinayo soo-saarka dunida iyo shuruudaha imtixaanka.
Daahan birta: HASL Lead lacag la'aan
Lakabyada: 8 Lakabka PCB
Waxyaabaha aasaasiga ah: Sare Tg 170 FR-4
Dahaarka Birta: Lead Lead free Qaabka wax soosaarka: SMT + Lakabyada: 8 Lakabka PCB
Waxyaabaha Saldhigga: Sare Tg 170 FR-4 Shahaadada: SGS, ISO, RoHS MOQ: Maya MOQ
Noocyada Solder: RoHS u hoggaansan Adeegyada Hal-Joogsi ah: Soosaarida PCB Iyo Golaha PCB ee Turnkey Tijaabinta: 100% AOI / X-ray / Visual Test
Keywords: Golaha PCB, been abuur PCB, Shuruudaha, Soosaarayaasha Golaha PCB, Golaha PCB raqiis ah, Shirkadaha Golaha Golaha Wareeg Daabacan
PCBFuture wuxuu ku lug lahaa wax soo saarka PCB. Sanadihii la soo dhaafay, waxaan ahayn macaamiil udub dhexaad u ah waxaanna keennaa naqshadeyn PCB-xawaare sare leh oo tayo sare leh, iyadoo la tixgelinayo wax soo saarka dunida dhabta ah iyo shuruudaha imtixaanka.
At PCBFuture, waxaan ku dadaalnaa inaan gacmaha is qabsanno macaamiisheenna. Laga soo bilaabo nooc-soo-saarka illaa wax-soo-saarka buuxa, waxaan nahay kordhinta awoodaha macaamiisha. Waxaan si joogto ah u kobcinaa barnaamijyadeena tayada leh iyo geedi socodka si aan ula kulanno ama uga badino shuruudaha macaamiisheena si joogto ah.
PCBFuture waxaa ka go'an inay hirgeliso nidaam maareyn tayo leh si wax soo saarkiisa iyo adeegyadiisu had iyo jeer u daboolaan shuruudaha macaamiisheenna.
Maxay tahay sababta Golahayaga PCB iyo adeegga wax soo saarka PCB?
Siyaasadeena tayada leh waa inaan siino alaab iyo adeegyo tayo leh si aan ulanoqno baahiyaha iyo rajooyinka macaamiisha Qiimo, Tayo, gaarsiinta waqtigeeda iyo Adeeg.
Waxaan taageernaa tixraaca tooska ah ee 24-saac iyo adeegga degdegga ah ee 12-saac ee loogu talagalay noocyada PCB. Ku takhasusay soo saarida PCB hal dhinac ah, PCB laba dhinac leh, PCB-ga badan, aluminium PCB iyo PCB dabacsan.
Waxaa naga go'an inaan la kulanno baahiyaha macaamiisheenna oo ka kala socda warshado kala duwan xagga tayada, gaarsiinta, kharash-ku-oolnimada iyo xalka PCB. Sidoo kale bixi adeeg khaas ah oo gaar ah. Ugu dambeyntiina, PCBFuture waxay u habeysaa PCB iyadoo loo eegayo miisaaniyaddaada si aad waqtigaaga u badbaadiso si aad ugu guuleysato suuqa.
PCB hal dhinac ah
Tijaabinta iyo barnaamijka
Golaha PCB leexo Quick
Codsiyada Guddiyada Wareegtada Daabacan:
1. Araajida Codsiyada
Laydhka leh aluminium PCB-based aluminium ah ayaa aad loogu jecelyahay dhowr codsi iyo warshado.
2. Elektarooniga Macaamiisha
Qalabka elektaroniga waa aaladaha aan isticmaalno maalin kasta, sida taleefannada casriga ah ama kombuyuutarrada. Xitaa moodooyinka cusub ee qaboojiyaha badanaa waxaa ku jira waxyaabo elektaroonig ah.
3. Qalabka caafimaadka
Codsiyada caafimaadka, xirmo yar ayaa loo baahan yahay si loo buuxiyo shuruudaha cabbirka ee maqaar-galaha ama kormeeraha qolka gurmadka. Sidaa darteed, PCB-ga caafimaadku wuxuu u muuqdaa inuu yahay takhasus gaar ah oo isku xira PCBs, sidoo kale loo yaqaan HDI PCBs. PCB-da caafimaadka ayaa sidoo kale lagu samayn karaa waxyaabo aasaasi ah oo jilicsan, taas oo u oggolaanaysa PCB inay rogrogto inta lagu jiro isticmaalka, taas oo muhiim u ah labadaba qalabka caafimaadka gudaha iyo dibaddaba.
4. Codsiyada Warshadaha
5. Codsiyada Gawaarida
6. Codsiyada Aerospace
Taxaddarrada soo-saaridda looxyo wareegsan oo heer sare ah:
1. Xakamaynta impedance waa mid adag, xakamaynta ballaadhka xariiqda waa mid aad u adag, dulqaadka guudna wuxuu ku saabsan yahay 2%.
2. Adeegsiga taargooyinka qaaska ah, ku dhejinta keydka naxaasta ee PTH ma ahan mid sarreeya. Guud ahaan, qalabka daaweynta plasma waxaa looga baahan yahay inay roughen daloolada iyo dusha sare si loo kordhiyo adhesion ee PTH copper iyo khad maaskaro Alxan.
3. Ha xoqin saxanka ka hor inta aanad caabin alxanka, haddii kale dhejintu waxay noqon doontaa mid aad u liidata, waxaana kaliya lagu dabooli karaa budada micro-corrosive.
4. Inta badan go'yaalku waa qalabka PTFE. Waxa jiri doona cidhifyo badan oo qallafsan marka ay samaysmaan kuwa wax gooya oo si caadi ah wax u gooya, kuwaas oo u baahan kuwa wax ku gooya masaxyada gaarka ah.
5. Guddiga wareegga isdabajoogga sare waa guddi wareeg gaar ah oo leh soo noqnoqoshada elektromagnetic sare. Guud ahaan marka la hadlayo, soo noqnoqoshada sare waxaa lagu qeexi karaa inta jeer ee ka sarreysa 1 GHz.
Astaamaheeda jireed, saxsanaanta iyo xuduudaha farsamada ayaa aad u baahan. Waxaa badanaa loo adeegsadaa nidaamka ka hortagga shilalka baabuurta, nidaamka dayax gacmeedka, nidaamka raadiyaha iyo qaybaha kale.
Hore: Smart TV Box Box PCB Main
Xiga: Golaha PCc-ga jaban
Golaha Elektarooniga PCB
Golaha PCB elektarooniga ah
Pcba elektaroonig ah
Golaha PCB elektarooniga
Golaha Elektarooniga ah PCB
Elektaroonigga ah Turnkey PCB
Gawaarida GPS Tracker Circuit PCB Assembly
Golaha Maamulaha Smart Electron Assembly Ser ...